အီစတာဖောက်ခွဲမှုအတွက် သီရိလင်္ကာက လူများစွာဖမ်းဆီး၊ မော်ရိုကိုက အကြမ်းဖက်သမား အချက်အလက်များ - Yangon Media Group
အီစတာဖောက်ခွဲမှုအတွက် သီရိလင်္ကာက လူများစွာဖမ်းဆီး၊ မော်ရိုကိုက အကြမ်းဖက်သမား အချက်အလက်များ
ကိုလံဘို၊ ဧပြီ ၂၅
သီရိလင်္ကာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့က အီစတာ တနင်္ဂနွေဗုံးဖောက်ခွဲမှုအတွက် သံသယရှိသူများ ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ယခုအခါ လူ ၆ဝ နီ ပါးရှိသွား ပြီဟုဆိုသည်။ အဆိုပါအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ကြောင့် လူပေါင်း ၃၅၉ ဦးသေဆုံးခဲ့ရသည်။ သီရိလင်္ကာအစိုးရက သတင်းများကြိုရခဲ့ သော်လည်း သတင်းဖြန့်ဝေမှုအားနည်းခြင်း ကြောင့် တိုက်ခိုက်မှုကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ဟု ဝန်ခံ ပြောကြားခဲ့သည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေအာဏာကို အသုံး ပြု၍ ညဉ့်ပိုင်းသံသယရှိရာနေရာများကို ဝင် ရောက်စီးနင်းခဲ့ကြောင်း၊ ယခု ၅၈ ဦး ဖမ်းဆီးထားကြောင်း၊ နောက်ထပ်ဖမ်းဆီးရန်များစွာရှိ နေသေးကြောင်း ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ရူဝန်ဝိဇေဝါဒီနီက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ပြော ကြားလိုက်သည်။ မော်ရိုကိုနိုင်ငံက ပြောကြားရာတွင် သီရိလင်္ကာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးသတင်းများကို ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း မော်ရိုကိုမီဒီယာများက ဖော် ပြခဲ့သည်။
အကြမ်းဖက်သမားများကို ဖမ်းဆီးရန်အတွက် မော်ရိုကိုထောက် လှမ်းရေးများက အဓိကအခန်း ကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့ကြကြောင်း မော်ရိုကိုအကြမ်းဖက် တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့၏ တရားစီရင်ရေး ဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဗဟို အဖွဲ့၏ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ ဒေသဆိုင်ရာသတင်းများက ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ သီရိလင်္ကာအစိုးရက ပြောကြားရာတွင် တိုက်ခိုက်မှုများစွာအတွက် လုပ်ဆောင်ထားသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ တင်းမာမှုများမြင့် တက်နေကြောင်း၊ ဧပြီ ၂၄ ရက်တွင် အာဏာပိုင်များကသံသယ ရှိသောအထုပ်တစ်ခုနှင့် မော် တော်ကားတစ်စီးမှ ပေါက်ကွဲ ပစ္စည်းများကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ ကြောင်းပြောကြားလိုက်သည်။
ဝိဇေဝါဒီနီက ဗုံးဖောက်ခွဲသူ များ၏အကြောင်း အသေးစိတ် ပြောပြခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ထိုအထဲမှ တစ်ဦးမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် သြစတြေးလျတွင် ဘွဲ့လွန်တက်ခဲ့ ပြီးမှ သီရိလင်္ကာသို့ ပြန်လာခဲ့ ကြောင်း၊ အခြားလူများမှာလည်း နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ခဲ့သူများ ဖြစ်သည်ဟုယူဆရကြောင်း ၎င်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြောသည်။ အကြမ်းဖက်သမား အများစုမှာ ပညာတတ်များဖြစ်ကြ ကြောင်း၊ အလယ်အလတ်တန်း၊ အထက်တန်းမိသားစုမှ ပေါက်ဖွားလာသူများ ဖြစ်ကြကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့မှ ငွေရေးကြေး ရေး ပူစရာမလိုသူများဖြစ်ကြ ကြောင်း၊ ၎င်းတို့မိသားစုများလည်း ငွေကြေးချမ်းသာကြကြောင်း၊ ဤကိစ္စမှာ ပူပင်စရာဖြစ်ရကြောင်း ဝန်ကြီးကပြောခဲ့သည်။
အကြမ်းဖက်ဖောက်ခွဲရာ တွင် မဟာဝေလာဥယျာဉ်နေအိမ်မှ ညီအစ်ကိုလူချမ်းသာနှစ်ဦး လည်းပါဝင်ကြောင်း၊ အသက် (၃၃)နှစ်ရှိ ကြေးနီစက်ရုံပိုင်ရှင် အင်ရှပ်အီဘရာဟင်လည်း အသေခံဗုံးခွဲသူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းသည် ဇိမ်ခံရှန်ဂရီလာဟို တယ်တွင် အသေခံဗုံးဖောက်ခွဲခဲ့ ကြောင်း ၎င်း၏မိသားစုနှင့်နီး စပ်သူတစ်ဦးက ပြောခဲ့သည်။ ဖာတီမာဖယ်ဇ်လာ၏ သားနှစ်ဦးအမည်ကို ဒေသမီဒီယာမျာ၌ ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း အစိုးရက ထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုသေးဟုဆိုသည်။ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦး၏ဖခင် သူဌေးမှာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အစား အစာ၊ ငွေကြေးပေးဝေမှု ဖြင့် ထင်ရှားသူဖြစ်သည်။ ယခု ၎င်း၏သားများက အကြမ်းဖက် ဖောက်ခွဲမှု၌ပါဝင်သည်ကို လူများက အံ့သြနေကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ကိုရီးယားပြန်များ အစိုးရထံပေးသွင်းထားသည့်အာမခံကြေးကျပ် ၁၅ သိန်း ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် ကြန့်ကြ?
မြောက်ဦးမြို့နယ် ဘောင်းဒုတ်ကျေးရွာရှိ နယ်မြေခံတပ်ဌာနချုပ်အား AA အချို့ ကျေးရွာအတွင်းနေရာ
မတော်တဆ ဆေးလွန်ကာ တွမ်ပတ်တီ သေဆုံးခဲ့ဟု ကောက်ချက်ချ
မြိတ်မြို့ တစ်ဖက်ကမ်းရှိ ရွှေသာလျောင်းဘုရား ရေစက်ချမင်္ဂလာ အခမ်းအနား ကျင်းပမည်
ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာ ၁၆ ရွာမှ ဒေသခံပြည်သူများ တောဆင်ရိုင်း အန္တရာယ်ကို စိုးရ?
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲ မော်လမြိုင်မြို့၌ ကျင်းပ